Weifang Joy Sea Trade Co., Ltd. kuyinto oluncedisayo kuphela ngurhulumente-owned by Weifang Binhai Tourism Group Co., Ltd., kunye ingqukuva ebhalisiweyo RMB million 50. inkampani yethu yasungulwa ngo-Agasti 2013, ibekwe Weifang loQoqosho-Technological Area Binhai Development, Shandong, China. Weifang Binhai Tourism Group Co., Ltd. kuyinto ishishini kuphela ngurhulumente-owned e Weifang, intloko obhalisiweyo RMB 306 million, kwaye ngoku asethi ogcweleyo ifikelela 26 billion.
Ngokusekelwe izinto zasekuhlaleni, ukuze asinyothule kwiphakade eli "Unobubele, ingqibelelo, iziphumo zokuphumelela" Umgaqo, ibiba kunye neenkampani ezininzi zasekhaya, ngokuthi kusetyenziswe yonke exhasa kunye nezibonelelo elwandle, kunye namaqela elite mzi, lizinikele ukuba umsebenzi olubanzi inkampani.
nobukhulu bayo ishishini kuquka izixhobo zekhompyutha, ifanitshala kunye nendlu ubuciko, umqhaphu, nezambatho kunye houseware, Premium, izipho, izinto zokwakha, mechanicals, isinyithi, bakurholela zomthi, iimveliso zolimo, bakurholela iglasi, iimveliso zasemanzini, iimveliso yolwabiwo kwakunye impahla nezingenayo nobuchwepheshe kwempahla, thethwano ulwazi ishishini, kunye nokuthengiswa ukutya.
Nangona le nkampani lunikezelwa ukuphuhlisa ishishini yorhwebo yamazwe ngamazwe kunye nayiphi na imfuno engqongqo, ngokusekelwe kwi-qhinga kazwelonke '' ibhanti mnye, indlela enye '' iimfuno, isebenzisa ngokupheleleyo iingenelo kwi-mali, izibonelelo kunye nemijelo, inikezela-inyathelo elinye inkonzo Rhweba ngaphakathi no Rhweba, yaye yakha uphuhliso okunempilo iinkampani urhwebo lwamazwe ngamazwe. Bamkele yinkokheli nayiphi na ushishino apha ekhaya nakumazwe angaphesheya ukuze utyalo-mali nentsebenziswano bezimali behlabathi, eyokucwangciswa kunye nokugcinwa.